परिषद् ऐनले चल्ने हो
अन्तर्वार्ता , स्वास्थ्य-जीवनशैली
परिषद् ऐनले चल्ने हो राम प्रसाद भण्डारी राम प्रसाद भण्डारी
विनय ज्याेती मंगलवार, भदौ १७, २०७६, ०२:०५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । करिब २५ सय नेपाली विद्यार्थी छन्, जसले माईक्रोबायोलोजीमा मास्टर्स गरेका छन् । पढाई पुरा भएपनि उनीहरुले काम भने पाउन सकेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरु केही समययता आन्दोलित छन् ।
नेपाल माइक्रोबायोलोजी संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरुले चरणबद्व रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनहरुले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी)लाई विरोधको तारो बनाएका छन् । परिषद्ले लाईसेन्सको अवसर नदिदाँ आफुहरु बेरोजगार बस्नु परेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नका लागि परिषद्ले जारी गरेको लाइसेन्स अनिवार्य रहेकाले आफूले पनि काम गर्न पाउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।
एक समय आन्दोलनकै सहारा लिएर केही माइक्रोबायोलाजिस्टले लाइसेन्स पाएका थिए । २०६८ सालमा १ सय २३ माइक्रोबायोलोजिस्टले अस्थायी लाइसेन्स पाए । तर उनीहरुको लाइसेन्स पनि नविकरण र स्थायी हुने काम हुन सकेन । हाल माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थी वेरोजगार सरहनै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा जनतापाटीका विनय ज्योती सापकोटाले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष राम प्रसाद भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
२०६८ सालमै लाइसेन्स वितरण प्रकृया सुरु भैसकेको थियो । तर फेरी किन रोकियो र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
हो, त्यतिबेला एक वर्षका लागि अस्थायी लाइसेन्स जारी गरिएको थियो । एकसय भन्दा माथिको संख्यामा लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । तर एनएचपिसीको पनि लाइसेन्स दिने मान्यता तथा ऐन हुन्छ । ऐनसँग त्यो प्रकृया मेल नखाएकाले स्थगित गरिएको थियो ।
खासमा यो विद्यार्थीले उठाउनुपर्ने विषय नै थिएन । विश्वविद्यालय क्याम्पसलेनै यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । तर यसो नभएकाले विद्यार्थीनै आन्दोलित हुनुपरेको छ ।
आन्दोलन पुनः सुरु भर्ईसकेको छ । आन्दोलनकारीसँग १५ दिनको समय माग्नु भएको थियो । त्यो समय आज सकिँदैछ । के–के काम भए ?
यसबीचमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टका डिन, डिपार्टमेन्ट हेड, प्रोफेसर प्रकाश घिमिरे लगायत आन्दोलनकारीसँग बसेर छलफल गरेका छौं । यस छलफलमा हामीले वर्कशप गर्ने निर्णय पनि गयौं । जसमा कोर प्रतिस्पर्धा (क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल माइक्रोबायोलोजिबीचमा भएका विषयको बारेमा टेष्ट) गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् अन्तर्गत के भईरहेको छ ?
हामीले छलफल गरिरहेका छौं । नेपाल सरकार – स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरैमात्र रजिष्टार नियुक्ति गरेको छ । अब यो हप्तानै बोर्डको बैठक बसेर छलफल अगाडी बढाउँछौ ।
एनएचपिसीका प्रतिनिधि पूर्वाग्राही भावले छलफल र निर्णय गर्छन भन्ने आरोप छ नि ?
यो त व्याक्तिगत कुरा भयो । आन्दोलनको मनस्थितीले उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होला । पूर्वाग्रह भन्ने कुरा हुँदैन । परिषद् ऐनले चल्ने हो । यसमा कुनै पूर्वाग्राह छैन ।
यस विषयमा अब के गर्दै हुनहुन्छ ?
रजिष्टारको नियुक्ती भर्खर मात्र भएको छ । यो हप्ताबाटनै छलफल अगाडी बढाउँछौ । सायद, यो छलफलमा विद्यार्थीले सहयोगनै गर्छन होला ।